အရူးမ - ဟဲ့ နားတစ်ပေါက် ထပ်ဖေါက်တော့ အသဲကွဲတာ ကောင်းရောလား အရူးမရဲ့။
မိန်းမကြီး - အပြင်မှာ အနာ ရှိတော့ အတွင်း ဒဏ်ရာ သက်သာမလား လို့ပါ။
အရူးမ - အတော် ရူးတာပဲ ဒီ အရူးမ၊ ဘယ်လို ဖြစ်ရတာတုန်း။
မိန်းမကြီး - တကယ် မပိုင်တဲ့ အရာ ပိုင်တယ် မှတ် ပြီး၊ မဏ္ဍပ်တိုင် တက်ပြ ၊ ရင်ကွဲ ရတာပဲ အဖတ်တင်ပါရော့လား၊
အရူးမ - ခက်တော့တာပဲ . အဲဒါ အချစ် ဟဲ့ အရူးမ ရဲ့။
မိန်းမကြီး - အချစ် က ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲ မသိတတ်နိုင်တော့ . အကုန်လုံး လွှတ်ချ လိုက်ချင်ပြီ။
အရူးမ - လွှတ်ချတိုင်း အေးအေးသက်သာ လွတ်ကျ သွားရင် ကောင်းပေါ့ အရူးမရဲ့ . အချစ် က လွယ်လွယ် နဲ့ ကျမကွဲ တတ်ပေဘူး။
မိန်းမကြီး - ည ည အိပ်မရတာ ခက်တာပဲ။
အရူးမ - အချစ်ပါ လို့ ဆိုနေ.. ဒီ အရူးမ နှယ်။
မိန်းမကြီး - သူ့ အကြောင်း ကျမ ဘာမှ မသိဘူး ။
အရူးမ - ချစ် တာမှာ သိစရာ လိုလို့ လား ကွဲ့။
မိန်းမကြီး - အချစ်အကြောင်း ပြောရအောင် အသက်တွေ ကြီး လွန်းတယ်။
အရူးမ - အသက် ကြီး ရင် မချစ်ရ ဘူးလို့ ဘယ်သူ က တား လို့ လဲ။
မိန်းမကြီး - အို. ဘာ ဖြစ် ဖြစ် ရှင်. ဒီနှစ် သင်္ကြန်က ကျမ အမုန်းဆုံးထဲပါခဲ့ပြီ၊ သင်္ကြန်တုန်းမပွင့်ခဲ့တဲ့ ပိတောက်တွေ ကျမ မြင်ပြင်းကပ်တယ်၊ ခရမ်းရောင်အဆင်နဲ့ ပိတ်စတွေ ကျမနားခင်းမပြနဲ့၊ ကျမ လက်ဆောင် လက်စွပ်မှာ သူများနာမည်နဲ့၊ ကျမ သူ့ ကိုမေ့ချင်တယ် .. နားပေါက် တစ်ပေါက် ထပ်ဖေါက်မှ ဖြစ်မယ်။
အရူးမ- အတော်ခေါင်းမာတာ ပဲ. အဲဒီ အရူးမ။
၁၉ ဧပြီ ၂၀၁၄
Posted by မမသီရိ at 4/19/2014 04:27:00 PM
Sunday, April 20, 2014 2:50:00 PM
ကဗျာတွေ စာတွေ လာဖတ်သွားပါတယ်။ အကြောင်းမသင့်ခဲ့လို့ အခုမှ ရောက်လာဖြစ်ပါတဲ့အတွက် တောင်းပန်တယ်။ ကျနော့်ဆီကိုလည်း လာခဲ့ပါဦးလို့ ဖိတ်ခေါ်တယ်။ အခု ဖတ်ထားပြီးတဲ့အထိ ထိပ်ဆုံးက ဘာသာပြန်ကဗျာလေးနဲ့ အခု ဒီကဗျာကို ကြိုက်တယ်။ ဆရာထူးအိမ်သင်ရဲ့ အချစ်မှာ အကြောင်းပြချက်များ မလိုဘူး ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို သတိရမိတယ်။ ကဗျာကောင်း စာကောင်းလေးတွေ ရေးပါဦး ဖတ်ချင်တယ်။
Thursday, May 28, 2015 6:23:00 AM